अल न्यू हुन्डाई आई २० सार्वजनिक, मूल्य ? – eSidhakura
मुख्य पृष्ठअटो अर्थ/बाणिज्यअल न्यू हुन्डाई आई २० सार्वजनिक, मूल्य ?
अल न्यू हुन्डाई आई २० सार्वजनिक, मूल्य ?
काठमाडौं । नेपालको लागि हुन्डाईको आधिकारीक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले पछिल्लो उत्पादन अल न्यू हुन्डाई आई २० नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । हुन्डाई आई २० आकर्षक र उत्कृष्ट डिजाइनको परिचित छ ।
हुन्डाई आई २० दुई भेरियन्ट मगाना र स्पोर्ट्ज भेरियन्टमा उपलब्ध छ ।नयाँ जेनेरेशन आई २० मा हुन्डाईको सफल १.२ लिटर कप्पा इन्जिन दिएको छ । उक्त इन्जिनले अधिकतम ६००० आरपीएममा ८३ पीएस पावर प्रदान गर्नेछ । उक्त इन्जिनमा म्यानुयल गियरबक्स दिइएको छ ।
मगानाको मूल्य ३६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र स्पोर्ट्जको मूल्य ४१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।स्पोर्टी डिजाइनमा सार्वजनिक गरिएको नयाँ आई २० को बाहिरी आवरण ै आकर्षक र सुन्दर देखिन्छ । प्रोजेक्टर हेडल्याम्प, जेड आकारको एलइडी टेल ल्याम्प, फ्लाईव्याक रियर ग्लाससहितको क्रोम बेल्टलाइन, स्लीक लुकिङ ग्लास, सार्क फिन एन्टेना, १६ इन्चको अलोय ह्वीललगायत विशेषताले गाडीलाई प्रिमियम लुक्स दिएको छ ।
व्ल्याक कलर इन्टेरियर, उत्कृष्ट सिट, फुल डिजिटल इन्ट्रमेन्ट क्लस्टर, ठूलो इन्फोटेन्टमेन्ट सिस्टम, मल्टी फङ्सनल स्टेरिङ ह्वील, आर्म रेस्टलगायत फिचरले आई २० लाई निकै विलासी र प्रिमियम गाडी बनाएको छ ।विभिन्न ६ कलर भेरियन्टमा उपलब्ध नयाँ जेनेरेशन आई २० टाइफुन सिल्वर, टाइटन ग्रे, मेटालिक ग्रे, स्टार्री नाइट, पोलार ह्वाइट र फायरी रेडमा छ ।
यात्रु सुरक्षाको लागि आई २० मा हुन्डाईले धेरै फिचर प्रदान गरेको छ । ड्यूल एयरव्याग, एबीएस, इबीडी, आपतकालीन स्टप सिग्नल (इएसएस) र स्मार्ट पेडललगायत फिचर छन् ।अतुलनिय ड्राइभिङ एक्स्पेरिएन्स, उत्कृष्ट पावर र पर्फमेन्स, एप्पल कार प्ले र एन्ड्रोइट अटो सपोर्ट गर्ने टच स्कृन इन्फोटेन्टमेन्ट सिस्टम, टायर प्रेसर मोनिटरिङ सिस्टम, रियर एसी भेन्ट्सले चालक र यात्रु दवबैलाई मनोरञ्जन सहितको यात्रा प्रदान गर्नेछ ।
हुन्डाईको नयाँ जेनेरेशन आई २० लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिको देशभर रहेका १४ वटै शोरुमाबाट विक्री सुरु भएको छ । विक्रीपछिको सेवाको लागि १८ वटा सर्भिस सेन्टरहरु मार्फत ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।